ရှူရှိုက်နိုင်သော Walking Socks ရှူရှိုက်နိုင်သော Walking Socks မှထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူ၊
ရှူရှိုက်နိုင်သော Walking Socks
Jin Minng Industrial Co., Ltd. ဦးဆောင်သည် Taiwan ၏ထုတ်လုပ်သူ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းနှင့်တင်ပို့ ရှူရှိုက်နိုင်သော Walking Socks သောအရည်အသွေးအကောင်းဆုံးကုန်ကြမ်းမှအင်ဂျင်နီယာနှင့်၎င်းတို့၏ကြံ့ခိုင်ဆောက်လုပ်ရေးနှင့်တာရှည်ခံဝန်ဆောင်မှုအသက်အဘို့အအသိအမှတ်ပြုသည်နေကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်မြင့်မားယုံကြည်စိတ်ချရသောနှင့်တာရှည်ခံအရည်အသွေးမြင့်မားကုန်ကြမ်းကို အသုံးပြု. ထုတ်လုပ်ပြီးမတူကွဲပြားသောဖောက်သည်ရဲ့လိုအပ်ချက်တစ်ခုကျယ်ပြန့်တွေလည်းရတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်ကုန်သွယ်ရေးနှင့်လူနေအိမ် applications များအများအပြားအမျိုးအစားများအတွက်အသုံးပြုသည်နှင့်ပုံစံများအမျိုးမျိုးရရှိနိုင်ပါတယ်နိုင်ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကွာအဝေးနိုင်ငံတကာစျေးကွက်အနှံ့ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ဖောက်သည်ကိုပြန့်ပွားခြင်းဖြင့်မြင့်မားသောဝယ်လိုအားအတွက်ဖြစ်ပါတယ်နှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းဦးဆောင်ဈေးနှုန်းများမှာ availed နိုင်ပါသည်။
ပုံစံ - K-4
function ကို：အသက်ရှူသောချွေးများ,ခြေထောက် Arch ပင်ပန်းနွမ်းနယ်တိုးတက်စေရန် Arch ထောက်ခံမှု,ခြေထောက်ကာကွယ်ခြင်း,
စရိုက်လက္ခဏာတွေ：ဝါဂွမ်းနှင့် spandex ၏ရောစပ်၏ဖန်ဆင်းတော်မူ၏,အရာထိတွေ့ရန်ပျော့ပျောင်းနှင့်ဝတ်ဆင်ရန်နွေးသည်,stretchy နှင့် breathable,သင့်ရဲ့ကလေးတွေကိုစေသည်’ခြေထောက်အဆင်ပြေ.နှစ်ဆဖုံးအုပ်ထားသောကြိုး-သမားရိုးကျဆန့်ကျင်ဘက်လမ်းညွန်နှစ်ခုကြိုးအားဖြင့်ပတ်ရစ်နေသည်.တစ်ခုက S လှည့်ကွက်ဖြစ်ပါတယ်,နှင့်အခြား Z ကိုလှည့်ကွက်ဖြစ်ပါတယ်(အပြင်ဘက်အဖုံးနှင့်အတွင်းပိုင်းအဖုံး)ချောချောမွေ့မွေ့ပါပဲ,ပျော့ပျောင်းနှင့်မြင့်မားသော elasticity.ခိုင်မြဲစွာဆုပ်ကိုင်နှင့်ခက်ခဲ-ပစ္စည်းဝတ်ဆင်ဂိမ်းထဲမှာခြေအိတ် slippage လျော့နည်းသေချာ.နှစ်သိမ့်မှုတိုးစေပြီးပွတ်တိုက်အားကာကွယ်ရန်ဒေါက်နှင့် metatarsal အရိုးနေရာများကိုအားဖြည့်ထားသည်.ခြေထောက်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုကိုလျှော့ချရန်အလင်းချုံ့ခြင်း–ခြေထောက်ကိုပွေ့ဖက်ပြီးအားကစားကစားနေစဉ်တွင်ခြေအိတ်ကိုထားရှိပေးသည်.သူတို့က snug fit နှင့်ဖနောင့်မှထောက်ခံမှုမှန်ကန်သောပမာဏကိုပေး,မဟာနှင့်ခြေကျင်း.တစ်ခုချင်းစီကိုခြေလျင်များအတွက်အထူးဒီဇိုင်း-L နှင့် R သည်ခြေအိတ်ပေါ်တွင်မှတ်သားထားသည်-လက်ဝဲနှင့်လက်ျာခြေမသည်.ပျော့ပျောင်းသောကြာရှည်ခံထည်,အားကစားလှုပ်ရှားမှုများအတွက်ပုံသဏ္andာန်နှင့် fitIdeal အတွက် elastane တည်ဆောက်ခြင်း.ကျွန်ုပ်တို့၏ကလေးများခြေအိတ်ဒီဇိုင်းသည်ရိုးရှင်းပြီးဂန္ထဝင်ဖြစ်သည်,လှပသောအသွင်အပြင်နှင့်အရောင်များသည်ကွဲပြားခြားနားသောဖိနပ်များ၊ အဝတ်အစားများနှင့်ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်သည်;နင်’t သူတို့ကိုကိုက်ညီဖို့အချိန်အများကြီးယူဖို့လိုအပ်ပါတယ်.
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.bestsportssocks.com/my/breathable-walking-socks.html
အကောင်းဆုံး ရှူရှိုက်နိုင်သော Walking Socks ကိုရှာဖွေရန်နှင့် ၀ ယ်ရန်အတွက်သင်သည် ရှူရှိုက်နိုင်သော Walking Socks မှထုတ်လုပ်သော၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူ၊ Taiwan ရှိစက်ရုံတစ်ရုံ